Yiziphi izinhlobo zezinja zemifino? Ngena uthole! | Izinja Umhlaba
Yiziphi izinhlobo zezinja zemifino?
Izinja zemifantu zigqama ngokuba namakhono amaningi, ukugcinwa kungabi yinkimbinkimbi kakhulu futhi futhi nokuziphatha ngendlela enhle ngaphakathi kwekhaya, ube ngabangane bakho abangenakuhlukaniswa.
Phakathi kwe Izinhlobo zezinja ezincane singathola ezinye ezithandwa kakhulu kunabanye futhi kulesi sihloko sizokukhombisa, nazo zonke izici zayo, ukuze ukwazi ukukhetha lowo omthanda kakhulu.
1 Izinja zezinja kufanele zithole imfundo efanayo
2 Inja yensikazi izala
2.1 IYorkshire Terrier Toy
2.3 I-toy poodle
2.4 I-Bichon Maltese Mini
Izinja zezinja kufanele zithole imfundo efanayo
Hhayi ngoba siphambi kwenja encane kufanele sishintshe imikhuba ekuyikhuliseni. Kungenzeka ukuthi laba bane ezinye izindlela zokuziphatha ezicasulayo, ngendlela efanayo nenja enkulu engaba nayo, kodwa ngokuqinisekile siyayithethisa eyokugcina ngaphezu kwezincane.
Lokho akukuhle neze, ngoba yize ubukhulu bayo, ngaso sonke isikhathi kufanele sicabange ngokuqeqeshwa okulungile kwanoma iyiphi inja, noma ngabe incane noma inkulu kangakanani.
Ngokuvamile, izinja ezincane zikhula kakhulu, isibonisa sonke isikhathi ngaleyo ndlela ukunganeliseki kwakhe phambi kwesimo esithile. Kepha ukuba mncane kangako, lokhu akusesabisi futhi kungagqugquzela nobumnene obuthile, into engalungile neze.
Uma singamkhuzi lapho ebhonga, inja ingacabanga ukuthi lokhu kuziphatha kuhle futhi kuzophindwa njalo lapho ingathandi lutho nhlobo. Ukuthi noma yikuphi ukuziphatha kwenja encane kusibangela umusa akusho ukuthi akufanele sibafundise ngendlela eqinile.
Inja yensikazi izala
Uyazazi zonke izinja zemifino ongaba nazo? Kukhona I inani elikhulu lezinhlobo zezinja ezincane ongaba nayo, ukukhulisa, ukufundisa nokutotosa ngaphandle kokuphazamiseka. Zonke zinhle kakhulu futhi azithathi okuningi ukujabula. Lezi izinhlobo ezinhle kakhulu zezinja:
IYorkshire Terrier Toy
Enye yezinja zezinja ezifakwe emabeleni ezikhethwe kakhulu ngabantu emhlabeni wonke, lesi yisibonelo senja lokho alidluli ubude obungamasentimitha angama-30, enezindlebe ezimile, ikhanda elincane futhi elingaba nesisindo esingaba amakhilogremu ama-4 esewonke.
Esinye sezici bonke abaphathi abakuso lolu hlobo lwenja ukuthembeka nothando lwakhe ngakubo, yize kunjalo futhi kuvame ukuba yindawo ethile, into okufanele siyisebenzisele imfundo enhle ukuze lokhu kungadlali ngathi.
Cishe cishe zonke izinhlobo ezincane, lezi zinja zivame ukukhonkotha futhi zivame ukuhlafuna yonke into abakutholayo endleleni yabo, ngakho-ke kumele bafundiswe kahle futhi lokhu ngeke kube yinkinga.
Ukuqeqeshwa kwabo kufanele kunikezwe ngoba bayimidlwane futhi akufanele uyeke ukubafundisa izici ezithile zemfundo. Ngisho noma sebekhule ngokwanele.
Phakathi kwezinkinga lolu hlobo olungaba nazo, ikakhulukazi empilweni yalo, iqiniso lokuthi akakhulisi kahle ugebhezi noma amazinyo akhe, okuthile okuzodala izinkinga ngokujwayelekile.
Enye inkinga kungaba ukwehla okungazelelwe kushukela wakho wegazi, okungukuthi, i-hypoglycemia, ngakho-ke uma sizibona lezi zimpawu, kufanele sizinike uju oluncane, yize ngaphambi kokwenza lokhu kuhlale kuneseluleko sokubona udokotela wezilwane.
Kungaba njalo enye yezinhlobo zenja encane ebonakale kakhulu kuyo yonke iminyaka futhi lokhu kungabangelwa iqiniso lokuthi luhlobo lwemvelaphi yemvelo ngokuphelele.
I-chihuahua ingafinyelela isisindo sama-3 kilos, yize ezimweni eziningi kungafiki nakulokho. Kungenxa yalesi sizathu nangenxa ye-physiognomy yayo ukuthi yaziwa njengenye yezinja ezincane kunazo zonke emhlabeni.
Ubude bayo bufinyelela kumasentimitha angama-20 ubuningi futhi ukuthungwa kwayo kuhlangene, nomzimba omncane kakhulu nemilenze enamandla kakhulu. Izindlebe zazo zivame ukuba ziqonde kahle futhi zinde ngokuma futhi ikhanda lazo liyindilinga kakhulu. Ubuhlakani babo bungesinye sezici abaziwa kakhulu ngazo nokusebenzisana kahle nezinye izinhlobo zohlobo olufanayo.
Zingaba yinkinga uma uzivumela ngokweqile. futhi lokhu kuhlobene nokuqina kwabo kanye nezimpawu ezinempilo, okufanele uzame ukukugwema. Kuyamangalisa ukuthi umdlwane wobukhulu obuncane obunjalo unempilo ende kangako, ukwazi ukuhlala iminyaka engama-20.
Njengazo zonke izinja, okunye ukuphazamiseka kungakhombisa futhi amaChihuahuas angaba nezinkinga emathanjeni abo, unezifo ezifana ne-glaucoma nezinye izinkinga enhliziyweni yakhe encane.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-poodle, ahlukahlukene kakhulu futhi anezinhlobo ezahlukahlukene zobukhulu eziwahlukanisa. Kuyinhlobonhlobo yalo yamathoyizi, encane kunazo zonke, enayo hhayi ngaphezu kwama-4 kilos wesisindo nosayizi omuhle phakathi kwamasentimitha angama-23 no-27 cishe.
Noma ngabe umncane kakhulu, amathoyizi amathoyizi ziboniswa ngokulingana ezilinganisweni zomzimba wakho. Imvamisa banezindlebe eziyindilinga nezinciphisayo, ezibanikeza ukubukeka okuhle kakhulu, yize izinwele zabo zingazemboza ngokuphelele.
Amakhanda abo ahlanganisiwe abenza bahambisane kakhulu futhi banamajazi wamathoni nezitayela ezahlukahlukene, phakathi kwazo lezo ezinama-curls noma izinwele ezisontekile zivame kakhulu, kepha kukhona nalabo abanezinwele ze-corduroy. Okumnyama, okumhlophe kanye nsundu ngamathoni ahlukanisa kakhulu ijazi lalo hlobo.
Yize zincane kakhulu, lezi zinja zidinga umsebenzi omningi futhi isizathu esisodwa salokhu kungenzeka ukuthi zenzelwe ukuzingela. Mayelana nalokhu kushoda kosayizi, noma kunjalo banamandla kakhulu, ngakho-ke bazobhoreka uma bengathokozi ngomsebenzi omningi.
Ingabe i- ubunzima bamehlo kanye nezinkinga ezithile ekukhuleni nakofuzo lwamathambo abo ezingabonakala njengezingelutho kulolu hlobo lokudlala ngamathoyizi.
I-Bichon Maltese Mini
Uhlobo oluphakathi kwezincane kunazo zonke emhlabeni, kusukela alufinyeleli kumasentimitha angama-25 ubude namakhilo ama-3 ngesisindo. Njengoba sinezinwele eziningi, singakholelwa ukuthi ziqinile kakhulu kunalokho eziyikho ngempela, kepha imvamisa zinomzimba omncane futhi ohlangane.
Lo mzimba uqinile futhi nekhanda lawo lincane, ngamehlo ayindilinga nezindlebe ezicishe zibe awukwazi ukubona ukuthi mancane kangakanani nokuthi zigcwele kanjani izinwele.
Ukuba nejazi losilika futhi elibushelelezi, labo abakhetha ukushiya izinwele zabo zinde kuzofanele bazinakekele cishe nsuku zonke, yingakho abanye abantu bekhetha ukuzisika. Bayajabula futhi bahlala njalo bafuna okuthile ukuze bazijabulise, kepha futhi kufanele zibekwe imingcele ethile ukuze zingasidaleli izinkinga.
Ukushisa nokushisa kwelanga kuyisitha sakho, ngakho-ke kuzofanele sibasuse kude nokuchayeka ngokweqile kulesi simo sezulu. Lezi yizinja zemifino ezibukwa kakhulu emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Yiziphi izinhlobo zezinja zemifino?
U-Akita inu, inja ekhetheke kakhulu
Ungayelapha kanjani imange ezinjeni ngamakhambi asekhaya